Teregiramu X, yakanyatsogadziriswa uye yakakosha kune iyo iPhone X | IPhone nhau
Teregiramu zvishoma nezvishoma yave ichiwana nzvimbo mune edu zvishandiso, uye kunyangwe zvichinetsa kuti rimwe zuva, zvirinani mune ramangwana, zvinotora hujmoni kubva kuWhatsApp, Izvo hazvigone kurambwa kuti kuyedza kwevagadziri vayo mukutipa isu maficha nyowani kwakanaka, pamwe nekujairira nekukurumidza kune zvitsva zveIOS.
Nhasi vaparura vhezheni itsva, inowirirana neiyo "yakajairika" vhezheni yatakaisa tese, uye inonzi "Telegiramu X". Icho chiri chishandiso chitsva chakanyorwa kubva pakutanga kushandisa Swift mutauro uye izvo kuwedzera kune zvitsva maficha senge maitiro uye madingindira, yakagadziridzwa kuve yakanyanya kuwanda uye ichidya shoma shoma bhatiri kana uchishandisa Apple nyowani programming mutauro, izvo zvakakosha zvikuru kunyanya kana iwe ukashandisa chinyakare chishandiso.
Shanduko inoonekwa nekukasira iwe paunovhura iyo nyowani application. Kupuruzira makwikwi ari nyore uye kurodha nguva ipfupi, chimwe chinhu chandakanga ndacherekedza munguva pfupi yapfuura mune yepamutemo vhezheni yeTeregiramu asi kuti kana uchishandisa iyi nyowani Teregiramu X inova inonyanya kuoneka. Ini handisati ndakwanisa kutarisa kana bhatiri richivandudzika sekutaura kwevanogadzira, asi tichifunga kuti Teregiramu ndeimwe yemapurogiramu andinoshandisa zvakanyanya uye anoshandisa bhatiri rakanyanya zuva nezuva, ichave nhau huru kana iri yakazadziswa.
Isu tine mukana wekusarudza pakati pemaonero akati wandei ane rima kana akareruka mamiriro. Kana iwe uine iPhone X, chero yematema madema achave akakunakira iwe pamusoro pekubatsira kudzikisa kushandiswa nekuve nechishandiso pachiratidziri. Iwe unogona kugadzirisa mamiriro uye saizi yefonti. Nekudaro, iyi application haina zvimwe zvinhu zvakaita seApple Watch application, asi chiri chinhu chatinotarisira kuti chichagadzirisa munguva pfupi inotevera.
Icho chikumbiro yakagadzirwa nevatambi vakaenzana veTeregiramuIcho hachisi chikumbiro chisina kukodzera, saka hapana chikonzero chekufungidzira nezvacho. Tinokurudzira kuti iwe uzviedze nekuti iwe uchaona mutsauko kubva paminiti yekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Teregiramu X, yakanyatsogadziriswa uye yakakosha kune iyo iPhone X
Kutenda neruzivo, ini ndiri kuenda kuyedza.
Zvinotaridza sekunge iri APP yakavapo kwemakore matatu uye ichangobva kuvandudzwa ...
Rakanyorerwazve iOS uye haina 3D Kubata pane yayo icon?
Ndokumbirawo utiudze kuti unoziva sei kuti zviri pamutemo kana pasina chinhu paTeregiramu webhusaiti uye musimudziri weese maAPP haana kufanana (kunyangwe zita racho rakafanana chaizvo, hongu)
Mhoro! Iyo yekuvandudza inowoneka makore matatu apfuura nekuti ivo vakatora nzvimbo yaive neTeregiramu HD yaive. Anapp yakabuda seyepamutemo Teregiramu app yeIpad asi yakazopedzisira yaraswa nekuti iyo iPhone app yapera kupihwa simba kuti ive yepasi rose.
Iwe unogona kuverenga izvo zvandakaudza Luis pazasi, asi iri 100% yepamutemo. Izvo hazvisati zvaziviswa futi. Ndiyo yekutanga.
Une chokwadi here kuti zviri pamutemo?
100%. Inogadzirwa neTeregiramu pasi penyaya ye "Telegraph Messenger LLP" sezvakatsanangurwa pamusoro apa kuna Luis.
Ndanga ndichiishandisa kubva iyo iPhone X payakabuda kubvira yekutanga yakapa matambudziko, uye yakagara iri huru, chakashata chinhu, kuti vanoenda kubhora ravo, nhau hadzi shande kana App yepamutemo ichiita, semuenzaniso, mukati mehurukuro inotsvedza bubble kuti ipindure haisati yaitwa, kunze kwezvinhu zvakaita semashure ekutaurirana kusakwanisa kusarudza kumashure kubva kuraibhurari uye kuisa imwe yeaya anouya muapp, kuti kutanga kuri muChirungu uye kwete tora mutauro wakasarudzika, uchifanira kushandura yako yapfuura kana kumanikidza kubata, uye majeti
IPhone padanho rayo sekugara
Ichokwadi ndechekuti ivo vanogara vachiburitsa nhau idzo mamwe mabhuku akarasikirwa zvachose. Kunge iyi nhau iyo midhiya mazhinji isina kuburitsa, inenge iri yega.
Iyo app inogadzirwa neTeregiramu zvakananga. Yakagadzirirwa kuve iyo nyowani vhezheni paIOS nekuda kwayo kukuru kuita. Izvo hazvisati zvaziviswa zviri pamutemo, asi zvinowanika paApp Store. Chikamu chekugadzirisa mabugs (kune akawanda kunyangwe mune yekupedzisira vhezheni sezvo iri iyo app yakanyorwa kubva pakutanga mu Swift iyo yakanga isati yaona mwenje kusvika zvino) uye pamwe nekuti iTunes Ungano inovhara yeKisimusi.
Kana izvo zvaunoda zviri CHIRATIDZO chekuti iyo app iri kubva kuTeregiramu (yepamutemo), iwe unogona kuona kuti musimudziri akafanana neayo epamutemo Teregiramu zvimiti zveMessage (nzira yekuunganidza mari nekusimudzira Teregiramu), pamwe neakafanana anovandudza pane MacOS maapp. Zvakare neGoogle Play pane Android.
Iyi "Teregiramu Yenhume LLP" (Ini handina kukwanisa kuwedzera mapikicha, asi ingo tsvaga muSafari ye "teregiramu mutumwa llp" uye icharatidza iyo Teregiramu app ye macOS.
Chokwadi, haisi iyeye anovandudza seiyo "yechinyakare" Teregiramu app. Ichi hachisi chimwe chinhu kunze kwekurerukira kwevanogadzira uye bhizinesi. Iyo "hunyanzvi" hunoshandiswa nemakambani mazhinji, senge Facebook, semuenzaniso, iyo isina mapurogiramu ayo ese pasi pe "Facebook, Inc."
Kana iwe uchiri kuda mimwe bvunzo, iwe unogona kuenda kune yekuvandudza nhoroondo yeApp Store muTeregiramu X uye iwe uchaona maitirwo ayo kubva 3 makore apfuura. Izvi zvinodaro nekuti yakatora nzvimbo yeTeregiramu HD, yaimbove yepamutemo Teregiramu yekushandisa kwePadad, asi nhasi uno iri imwechete Teregiramu yekushandisa ye iPhone nePadad.
Iwe unogona kutarisira kuziviswa kwepamutemo munguva pfupi.
Ngatione pavanoshandisa chaiyo rima theme kune iOS !!!
Jesu Manuel Blázquez akadaro
Ndataura kuti muboka chats haukwanise kumisikidza yambiro yemunhu yambiro… .Ndinovimba munonditeerera…. Ndiri kuzonyunyutawo kuti pane imwechete sarudzo mu3D Kubata.
Pindura kuna Jesús Manuel Blázquez
Unogona here kushandisa dzakasiyana nhare mbozha mune yega yega maapplication uye nekudaro uine maTeregiramu maviri (semuenzaniso: wega + basa) pane imwechete foni?
Iwe unogona kuve neese maTeregiramu maakaundi aunoda, chero bedzi uine nhamba kumashure kuti ugadzire iyo. Uye iwe unogona kupinda mukati seakawanda mawebhusaiti sezvaunoda.
Unogona kushandisa Teregiramu, Teregiramu X, Teregiramu yewebhu uye ese echitatu-bato maapplication uye uine rakasiyana account mune yega yega.
Zvakanaka, kana yakanyatsogadzirirwa iPhone X, nei isina FaceID ???
Ini ndangoisa uye ini handikwanise kushandisa yangu FaceID iyo yandinogona kuita neyakajairwa vhezheni yeTeregiramu.